Magacyada xubnaha maamulka Somaliland uga qeybgelaya wadahadalka Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magacyada xubnaha maamulka Somaliland uga qeybgelaya wadahadalka Turkiga
A warsame 28 February 2015 28 February 2015
Mareeg.com: Wafdiga Somaliland uga qeybgelaya wadahadalka ay la gelayaan dowladda Soomaaliya ayaa ka ambabaxay Hargeysa, iyagoo kusii jeeda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Wafdigan oo uu hogaaminayey Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yoonis waxaa xubno ka ah Wasiirka Beeraha, Faarax Cilmi Geedole, Wasiirka Duulista iyo Hawada, Maxamuud Xaashi Cabdi, Wasiirka Xanaanada Xoolaha, Cabdi Aw Daahir, Guddoomiye Ku-xigeenka Kowaad ee Golaha Wakiilada, Baashe Maxamed Faarax, Guddoomiye Ku-xigeenka Kowaad ee Guurtida, Siciid jaamac Cali, Xildhibaan Kijaandhe iyo Xildhibaan ka socday Golaha Guurtida.
“Aniga iyo weftiga balaaran ee ila socdaa waxaanu u baxaynaa Turkiga oo shirkii Somaliland iyo dowladdii Xamar ka furmayo, soconayana Axadda iyo Isniinta, waxaana filaynaa inaanu guulo ka keenno” ayuu yiri Wasiirka arrimaha debadda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha Hargeysa.
Wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ayaan weli magacyadooda la shaacin, weli aan ka bixin magalaada Mqudisho.
Xawaaladaha Soomaalida ee USA oo berri dib u furmaya
Alshabaab oo Diinsoor ku toogtay wadaad lagu sheegay Sixiroole